Unandisa izihlwele nge-hip hop | News24
Unandisa izihlwele nge-hip hop
isithombe : sithunyelweUmculi we-hip hop uPhindise Ijoni
UMCULI waKwaNyuswa obizwa ngoPhindise aphinde aziwe ngelika Ijoni Labantu ongumculi we-hip hop, uthi umculo wakhe uthokozelwa abaningi emphakathini ngoba usebenza ngokuzikhandla nokuzimisela kuwo.
Uthe: “Ngisebenze nabantu abaningi baKwaNyuswa nase zindaweni ezisondelene nayo kubalwa ePinetown, eHillcrest, KwaDabeka nase Clermont. Umculo wami uthokozelwa iningi emphakathini, lokho kungenza ngizibone ngisezingeni lo saziwayo base Ningizimu Afrika emnyakeni ezayo. Ngihlezi ngizigqugquzela ekutheni ngazi ukuthi impumelelo yami izokwenzeka uma nje ngisebenza kanzima futhi ngokuzimisela,” kusho yena.
Uqhube wathi umculo we-hip hop use zingeni eliphezulu eNingizimu Afrika.
“I-hip hop isikhule ngendlela eyisimanga eMzansi yize yaqala phesheya kwezilwandle, lokho kuyangi thokozisa ngoba baningi abaculi be-hip hop emzansi abane thalente elimangalisayo futhi abadinga ukuxhaswa ngayo yonke indlela.”
“Ezingomeni engiziqophayo ngisebenzisana noMthoko okunguyena ohlanganisa izinsimbi zezingoma. Abantu bengalindela ama-single okwamanje ngoba i-album noma i-mixtape angikazoyi qopha ngenxa yokuthi ngisafuna umculo wami usabalale nakwezinye izindawo.”
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngoPhindise utholaka ku-Facebook ekhasini elithi: Phindise Ijoni noma ikhasi ku-Twitter naku-Instagram elithi: @phindise_ijoni.
Uma uthanda ukuzwa umculo wakhe noma ukumqasha emcimbini thumela ngekheli le email elithi: phindiseijoni@gmail.com